तिमोथीलाई पावलको पत्र ! | Nepali Christians
तिमोथीलाई पावलको पत्र !
August 25, 2014 3:51 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
जब मैले यो पत्र पडे ! म साँच्चै नै मनै मन भित्र आनान्दित भए ! पत्र भित्र लेखिएको एक एक शब्दले मेरो आत्मा बिश्वास बडेको थियो ! के हामी पनि पावल प्रेरितको प्रीय बालक तिमोथी जस्तो प्रभुमा भर पर्दो दास बन्न सक्दैनौ र ? ताकी हामी माथि पनि कसैले पूर्ण रुपले बिश्वास राख्न्न सक्योस् ! भर पर्ने सक्योस् ! पावलले तिमोथी माथि गरेको भरोसा अनि आत्मा बिश्वास सम्बन्धित यो पत्र पडेर म साँच्चै नै ज्यादै प्रोत्साहित भएको छु !
मेरो ख्रीस्टीय जीवनमा प्रेरित पावलको जिवांनीले ज्यादै उत्साहजनक प्रेरणा मिलेको छ मलाई ! ! उनले पत्र द्वारा लेखेको हरेक भनाई – अर्थी – सुझाउ अनि अमुल्य बचनहरु मेरो निम्ती लाठी भएको छ ! जसरी कदम बढ्न अघि पहिला हातको लाठी अघि सरेको हुन्छ त्यसपछि पाईला पछि पछि लागेको हुन्छ ठीक त्यसरी नै पावलको पत्रको हरेक भनाई – अर्थी – सुझाउ अनि अमुल्य बचनहरु मेरो निम्ती लाठी भएको छ ! पावलले ख्रीष्टमा भोगेको पिडा अनि सहन परेको कष्टमा परमेश्वरलाई कोसना या दोषयाउँनको बदला – आफ्नु प्राणको रक्षा गर्नु होस् भनी प्रार्थना गर्न बदला ! मैले सहन परि रहेको पिडा अनि कष्टबाट मलाई बचाउन होस् भनी बिन्ती गर्न सट्टा उहाँले यो भन्नु भयो – Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! फिलिपि ४:४ ! जब जब पनि मेरो जीवनमा कहिले कहिँ अकस्मात कुनै यस्तो स्थिती आए म यहि बचनलाई स्मरण गर्छु अनि साहस पुर्वक हांसी हांसी सही दिने गर्छु ! प्रभुको साहसी दास पावललाई साचै नै मेरो हृदय भित्रबाट सलाम !
मेरो प्रीय बालक तिमोथीलाई !
पर्मेश्वर पिता र हाम्रो प्रभु येशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह,कृपा र शान्ती !
मेरो पिता पुर्खादेखि शुद्द बिबेकले मैले सेवा गरेको पर्मेश्वरलाई म धन्यबाद चडाउछु ! मेरो अन्तर बिन्तीमा रातदिन तिम्रै सम्झना ममा कस्तो अटुट छ ! तिम्रो आँशुलाई सम्झेर,तिमीलाई हेर्ने ईच्छा गरी म आनन्दले भरीपुर्ण हुन्छु ! तिमीमा भएको निष्खोट बिश्वासको सम्झना भएर जो पहिले तिम्री बज्यै लोईस र तिम्री आमा युनिसमा थियो ,र तिमीमा पनि म छ भन्ने मलाई निशच्य छ ! त्यसैकारण म तिमीलाई सम्झाउछु कि मैले तिमीमा हात राखि दिए बाट तिमीमा भएको पर्मेश्वरको बरदानलाई बल्दो पार !
पर्मेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति,प्रेम र आत्मा सँयमको आत्मा दिनु भएको छ यसकारण हाम्रो प्रभु को साक्षीको शर्म नमान ! नता उँहाको कैदीको तर पर्मेश्वरको शक्तिअनुसार सु-समाचारको निम्ती कष्ट भोग ! ख्रीष्ट येशुमा तिमीले मबाट जे सुनेको छौ ती पक्क कुराहरुको नमुना पक्री राख ! तिमीलाई सुम्पेको उतम नासोलाई पवित्र आत्माद्वारा सुरक्षित राख ! यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्टमा बलियो हौ औ धेरै जना गवाहीहरुको बीचमा तिमीले मबाट सुनेको कुराहरु जुन हुन तिनै अरुहरुलाई पनि सिकाउने सक्ने बिश्वासी मानिसहरुलाई सुम्पी देउ !
ख्रीष्ट येशुको असल सिपाही झै मसंग कष्ट भोग ! परिश्रम गर्ने किसानले नै फसलको पहिला फल पाउनु पर्दछ ! म के भन्दछु त्यो बिचार गर किन भने यी सब कुराहरुमा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनु हुनेछ ! हामी उँहासँगै मरयौ भने उँहासँगै नै जिउने पनि छौ ! हामीले सहयौ भने उँहासँग राज्य पनि गर्नेछौ ! हामीले उँहालाई ईन्कार गरयौ भने उँहाले पनि हामीलाई इन्कार गर्नु हुनेछ ! सत्यको बचनलाई ठीकसंग प्रयोग गरेर शर्माउना नपर्ने खेताला भई आफुले आफुलाई परमेश्वरको ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर ! प्रभुले आफ्नु जातिलाई चिन्नु हुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने जति हरेक अधर्मिकताबाट दुर रहोस ! जवानीको अभिलाशाहरु बाट भाग र शुद्द हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरुका साथ साथै धार्मिकता – बिस्वाश – प्रेम – शान्तीका पछी लाग ! तर यिनीहरुबाट झगडा उत्पन्न हुन्छ भनी जानेर मुर्ख र बेसमझका सवाल जवाबहरुलाई ईन्कार गर ! प्रभुको सेवकले झगडा गर्नु हुँदैन तर सबै प्रति भला सिखाउँन सक्ने सहनशील ! आपसमा बिरोध गर्नेहरुलाई नम्रसंग सच्याउने हुनु पर्छ !
बचन प्रचार गर ! समय र बेसमयमा तयार रह ! सब सहनशीलताको साथ दोष देखाई देउ ! हप्काउ अर्ति देउ ! किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरु पक्का सिधान्तलाई नहने हुनेछ ! आफ्नु अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षकहरुको थुप्रो लगाउने छं र जे सुन्नलाई तिनीहरुको कान उत्सुक बन्छ त्यहि मात्रै हुन्छ ! सत्यता तिरबाट कान फर्काएर दंत्य कथातिर लाग्नेछ ! तर तिमी चै सब कुराहरुमा सचेत होउ !कष्ट भोग ! प्रचारको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर !
मैले उतम लडाई लडेको छु ! मैले दौड सिध्याएको छु ! बिश्वाशलाई बचाई राखेको छु ! अब उप्रान्त मेरो निम्ती धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिक न्यायादिश प्रभुले त्यसदिन मलाई र मलाई मात्रै होइन तर आगमन प्रिय मान्नेहरुलाई समेत दिनु हुनेछ ! प्रभुले मलाई हरेक खराब कामबाट जोगाउनु हुनेछ र मलाई उद्दार गर्नु हुनेछ जसलाई सदा सर्वदा महिमा होस् ! प्रभु तिम्रो आत्मा संग रहुन ! तिमीलाई अनुग्रह मिलोस !
प्रेरित पावलद्वारा लेखिएको हरेक पत्रहरुले हामीलाई उत्साहित गरेको हुन्छ यस्ता प्रभुको असल दासहरुको जीवानीबाट हामीले पाठ सिक्न पर्छ ! पहिला यहि व्यती कति कठोर र ख्रीस्ट बिरोधि थियो ! तर आज त्यहि ख्रीष्ट बिरोधि मान्छे ख्रीस्ट कै सबै भन्दा प्रीय दासहरु मध्ये एक हुन पुग्यो ! कति ठुलो परिवर्तन आउन सक्यो उनको जीवनमा ! जसरी पवाललाई प्रभुले आफ्नु कामको लागि चुन्नु भएको थियो त्यसरी नै प्रभुले हामी सबैलाई पनि केहि न केहि कामको लागी चुन्नु भएको छ ! पावलले त प्रभुले दिनु भएको काम ईमान्दारीसंग गरेर सिध्याउन मा सफल हुन सक्यो त्यसरी नै हामीले पनि प्रभुले हामीलाई दिनु भएको काम इमानदारी संग पुरा गरौ !
पावलले त्यस समय आखिरी दिनमा हुने जुन सम्भावनाहरु त्यस समय लेखेको थियो त्यो सबै आज हामीले देखन थालेको छौ ! तर यो जान कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउनेछ किनभने मानिसहरु स्वार्थी – धनका लोभी – अहंकारी – हटी – निन्दक – माता पिताको आज्ञा पालन नगर्ने – बैगुनी – निष्ठुर – अपवित्र स्वाभाविक प्रेम रहित – असयामी – असल नरुचाउने – बिश्वाशघाती – उताउला -दिमागी – परमेश्वर भन्दा बरु सुख बिलाष निको मान्ने – भक्तिको भेष चै लिने तर त्यसको शक्तिलाई चै इन्कार गर्ने हुनेछन ! यिनीहरुबाट पर बस !
पावलले यो पनि भन्नु भएको छ – यदि कोहि ख्रीष्टमा बाटो भटकिएको छन् भने उसलाई हप्काउ अनि अर्थी पनि देउ भनेको छन् यसैले यदि कसै ख्रीष्टको दास शैतानको माया जालमा फसेर पर्मेस्वरको ईत्छा बिरुद्द काम गर्दै गरेको थाहा पाए यो उसको निजि मामला हो भनेर अनदेखा नगरेर उसलाई कम से कम एकपल्ट ख्रीष्टको सन्तान हुनको नाताले उसलाई हप्काउ या अर्थी जरुर दिउ ! बरु बदलामा उसकोबाट गाली सुन्न परे पनि सुनौ ! तर न्यायको दिन हामीले प्रभुबाट यो सुन्न नपरोस – तिमीलाई त सबै कुरो थाहा थियो तर तिमीले उसलाई शैतान को तर्फ जानदेखी किन रोकेनौ ?
जसरी पावलले आफु भन्दा धेरै सानो केटो तिमोथी माथि यति ठुलो बिश्वास अनि भरोसा राख्न्न सक्यो त्यसरी नै हामी पनि प्रभुको नजरमा बिश्वास योग्य र भरोसा योग्य बन्न सकौ ! संसार त्याग्न अघि मैले पनि पावलले झैँ यो भन्न सकेको होस् –मैले उतम लडाई लडेको छु ! मैले दौड सिध्याएको छु ! बिश्वाशलाई बचाई राखेको छु ! अब उप्रान्त मेरो निम्ती धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिक न्यायादिश प्रभुले त्यसदिन मलाई र मलाई मात्रै होइन तर आगमन प्रिय मान्नेहरुलाई समेत दिनु हुनेछ ! प्रभुले मलाई हरेक खराब कामबाट जोगाउनु हुनेछ र मलाई उद्दार गर्नु हुनेछ जसलाई सदा सर्वदा महिमा होस् ! प्रभु तिम्रो आत्मा संग रहुन ! तिमीलाई अनुग्रह मिलोस !
प्रभुको शान्ती हामी सबैमा रहोस !
Aruna Rai	2014-08-25
तिमोथीलाई पावलको पत्र ! Reviewed by Admin on Aug 25 . तिमोथीलाई पावलको पत्र ! जब मैले यो पत्र पडे ! म साँच्चै नै मनै मन भित्र आनान्दित भए ! पत्र भित्र लेखिएको एक एक शब्दले मेरो आत्मा बिश्वास बडेको थियो ! के हाम तिमोथीलाई पावलको पत्र ! जब मैले यो पत्र पडे ! म साँच्चै नै मनै मन भित्र आनान्दित भए ! पत्र भित्र लेखिएको एक एक शब्दले मेरो आत्मा बिश्वास बडेको थियो ! के हाम Rating: 0
पिता मलाई मेरो जन्म दिनको उपहारमा त...१११ वर्ष पुगिन आमा डल्लीमाया...
इसार्इ चलचित्र ‘क्याफे’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)